Musiac Inkonzo Yokucebisa Ngomculo - Imagazini yoyilo
Inkonzo Yokucebisa Ngomculo
Inkonzo Yokucebisa Ngomculo I-Musiac iyinjini yokucebisa yomculo, sebenzisa inxaxheba ebonakalayo ekufumaneni ukhetho oluchanekileyo lwabasebenzisi bayo. Ijolise ekucebiseni ezinye iindlela zokunxibelelana nomngeni kulawulo lwe-algorithm. Ukucoca ulwazi sele kuyindlela yokukhangela engenakugwenywa. Nangona kunjalo, kudala iziphumo zegumbi le-echo kwaye zinyanzele abasebenzisi kwindawo yabo yokuthuthuzela ngokulandela ukuthanda kwabo ngokuthandileyo. Abasebenzisi bayazixakekisa kwaye bayeke ukubuza okukhethwa ngumatshini. Ukuchitha ixesha lokujonga ukhetho kunokunyusa iindleko ezinkulu ze-bio, kodwa ngumzamo owenza amava anentsingiselo.
Igama leprojekthi : Musiac, Igama labayili : Chia-Min Lin, Igama lomthengi : LinStudio.
Uyilo lolungisa izixhobo
Inkonzo Yokucebisa Ngomculo Chia-Min Lin Musiac